Kulan looga hadlayo xanuunka jadeecada oo ay qabatey Xildhibaanad Ilhaan Cumar. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Kulan looga hadlayo xanuunka jadeecada oo ay qabatey Xildhibaanad Ilhaan Cumar.
Kulan looga hadlayo xanuunka jadeecada oo ay qabatey Xildhibaanad Ilhaan Cumar.
Xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan Golaha wakiilada ee Minnesota ayaa shalay galab ku qabatay xarunta Brian Coyle Center ee xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Cedar Riverside, Kulan looga hadlaayay tirada dadka Jadeecada ku dhacayso oo sii kordhaysa MN iyo sidii loo xakamayn lahaa,waxaa ka soo qeyb galay masuulka ugu sareeya waaxda caafimaadka ee gobalka Minnesota Edward P. Ehlnger iyo xubno kale oo tirsan aqalka sharci dajinta Minnesota.
Kulanka ayaa looga warbaxiyey dadwaynaha cudurka jadeecada oo maalinba maalinta ka danbeysa ku sii baahaya Soomaalida Minnesota heerka uu marayo iyo dagmooyinka uu u gudbay isagoo markii ku bilaabmay hal dagmo oo qura.
Dadwayne Suaalo Waydiinaya Waaxda Caafimaadka Minnesota
Tirada guud ee caruurta laga helay cudurka jadeecada ayaa haatan waxa uu marayaa 63 oo 53 ka mid ahi ay Soomaali yihiin, sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee gobalka.
Caruurta Soomaaliyeed ayaa sababta looga helay cudurka jadeecada waxa ay wasaradda caafimaadka ku sheegtay inay tahay talaal la’aanta.
Dr. Edward Ehlinger, madaxa wasaaradda caafimaadka ee gobalka Minnesota oo la hadlayay dadkii goobta isugu yimid, ayaa sheegay in cudurka jadeecadu uu yahay cudur laga hortagi karo, islamarkaana uu keeni karo dhimasho, waxa uuna carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in kor loo soo qaado heerka talaalka caruurta soomaaliyeed oo aad u hooseeya.
Xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa iyaduna HOL u sheegtay inay kulankaan uga dan lahayd in dadka Soomaalida lagala hadlo sidii xanuunkaan faafaya loo soo afjari lahaa,ilmahana lagu dhiirigaliyo inay talaalaan waalidiintu,waxayna ku dartay in loo baahan yahay wacyi galin guud oo bulshadda loogu baaqo ka hortaga Jadeecada.
Xildhibaan Ilhan Cumar ayaa sheegtay in golaha wakiilada ee gobolka Minnesota ay ka shaqeynayaan sharci sadax qeybood ka kooban, oo ah qarash lagu bixiyo wacyigelinta bulshada, in laga hortago dhamaan cudurada faafa iyo in waalidka diida inuu ilmihiisa talaalo lagu qasbo inuu marka hore dhakhtar la kulmo.
Mas’uuliyiinta Soomaalida iyo kuwa caafimaadka ee gobalka ayaa dhowrkii todobaad ee la soo dhaafayba waxa ay wadeen dadaalo wacyigalineed oo bulshada loogu sheegayo in ay ilmahooda jadeecada ka talaalaan.
Waalidiintii goobta ku sugnaa ayaa suaalo dhawra waydiiyay xeeldheerayshii caafimaad ee goobta ka hadlay iyagoo ka hadlay walwalkooda ku aadan talaalka MMR ee jadeecada loo qaato, kaas oo ay u diideen inuu keenayo xanuunka Autismka .
Previous articleGarabka DHalinyarada Xisbiga Daljir oo Qabtey Munaasabadda 15ka May(SAWIRO).
Next article26 Isbaaro oo ay sheegeen Maamulka G/sh/dhexe in ay ka qaadeen deegaano hoostaga Gobolkaas.